Korea Atsimo : 41 No Maty Tao Anatin’ny Tondra-drano Mahery Vaika Sy Fihotsahan’ny Tany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Aogositra 2011 7:11 GMT
Loza maro tsy voatanisa
Tao anatin'ireo loza maro tsy voatanisa, ny firotsahana tany tao amin'ny tendrombohitr'i Woo-myun izay vokatry ny ora-mikija, niantraika mafy tamin'ny mponin'ireo Koreana Tatsimo. Voalaza fa 32 no maty tamin'ilay loza, miampy ireo mpianatra folo avy aminà kolejy nanao asa maimaim-poana. Ilay tendrombohitra dia ao an-tanànan'i Seoul renivohitra sady koa faritra misy ilay toerana nanitrihana vanja mipoaka tototra nandritra ny Adin'ny Koreana, loza mitatao izay niteraka tahotra niparitaka tamin'ny vahoaka.
Oram-batravatraa be loatra nahatonga tondra-drano tao amin'ny Faritanin'i Gyeong-gi Province, Korea Atsimo , Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitter @karistuck, Nakarina tao amin'ny vohikala Wiki Tree (CC BY 2.0)
Iray amin'ireo mpampiasa Twitter malaza ao amin'ny firenena i Dogsul (@dogsul) izay nahangona mpanara-dia 110.000, nibitsika [ko] farany ny 27 Jolay :
Ny zavatra iray izay nampanahy ahy momba ilay firotsahan'ny tany tao amin'ny faritr'i Woo-myun dia ireo vanja milevina. Amin'ireo toerana izay [nampiasaina ] (nandritra ny Ady), ny tendrombohitr'i Woo-myun no isan'ny toerana be vanja milevina betsaka indrindra. Indro lahatsoratra iray mahakasika izany. http://t.co/Lyyzv2F [ko]
Vao maraina ny 28 Jolay, vaovao iray avy tao an-toerana[ko] no nitanisa fanambarana miaramila iray izay nilaza fa tsy nahavita ny nanavotra vanja mipoaka folo izay very nandritra ilay tondra-drano akory izy ireo.
Ilay mpampiasa Twitter Funpt nibitsika sary telo nalainà olom-pantatra mipetraka eny akaikin'ilay tendrombohitra :
Ny tendrombohitra Woo-myun ambony ambany. twitpic.com/5wf1a0 twitpic.com/5wf1a1 twitpic.com/5wf1a2
Tendrombohitra Woo-myun ambony ambany. Sary avy amin'i @Funpt.
Oh Ja-young (@urpurple) nibitsika [ko] rohy mankamin'ny lahatsarim-baovaon'olon-tsotra momba ilay firotsahan'ny tany tao an-tendrombohitra :
Ity ilay lahatsary momba ilay firotsahan'ny tany tao Woo-myun : tvpot.daum.net/clip/ClipViewB… […] Ilay horonantsary ‘Haeundae’ dia tsy misy dikany raha oharina amin'ity loza ity. Toy ireny mijery horonantsary mampitahotra ireny ilay izy
Sarin'ireo trano teo akaikin'ny tendrombohitra Woo-myun. Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitter @stella868, Nakarina tao amin'ny vohikala Wiki Tree (CC BY 2.0).
Seo Hyung-wook (@minariboy), mpitantara baolina kitra, dia nanakiana [ko] ny Ben'ny tanàn'i Seoul, Oh Se-Hoon sy ireo olona nifidy azy ho eo amin'ny toerany. Ny distrikan'i Gangnam dia iray amin'ireo faritra manankarena indrindra ao amin'ny firenena, ary koa isan'ireo faritra tena vodona mafy tamin'ilay tondra-drano :
Lasa ben'ny tanàna an'i Seoul io lehilahy io tamin'ny nahazoany vatom-pifidianana betsaka tao amin'ny faritr'i Gangnam. Nandritry ny dimy taona lasa farany teo, notapahany tsikelikely ny famatsiam-bola natokana ho fisorohana ny tondra-drano, ary nataony ho iray ampaha-folon'ny vola natokana ho amin'izany nony farany. Vokany, nirodana ny tendrombohitr'i Woo-myun androany, tapaka ny jiro ary tondraka ny Daechi, toby mpamokatra herinaratra ao amin'ny faritr'i Gangnam sy ny toby ao Gangnam. Ny mponina ao Gangnam dia nahazo io loza io ho setrin'ny vatom-pifidianana marobe nomeny. Zava-dehibe marina tokoa ny fifidianana.
Peristory, Kaonty Twitter izay anà fikambanaan tsy mitady tombontsoa manokana, izay mandalina ireo politika ara-toekarena ho an'ny olon-tsotra ary miaro ny zon'ny mpanjifa dia nibitsika hoe [ko] :
Io fihotsahana tany tao an-tendrombohitr'i Woo-myun io dia nifaoka fiara iray ary nitondra azy hatreny amin'ny rihana fahatelon'ny trano be iray. (sary tsindrio ity http://twitpic.com/5wkokg )
Ninoana fa [ko], amin'ny ampahany, ilay fihotsahana tany dia mety ho vokatry ny fandavahana zohy teo akaikin'ilay tendrombohitra, nefa i Peristory nanamafy [ko] fa misy antony hafa koa :
Moa ny ‘fitiavan-tena ‘ va no nahatonga izao fihotsahana tany izao? Ny biraon'ny distrikan'i Seocho dia namolavola drafi-panorenana hisorohana ny fihotsahan'ny tany. Fa satria ny 97 isan-jaton'ny tany dia fananan'olon-tsotra, betsaka ny fanoherana ka tsy nahafahan'izy ireo nanomboka izany akory.
Miady mafy mba hanavo-tena
Ireo fiara manavo-tena ao amin'ny faritr'i Gangnam , Seoul, Korea Atsimo, Sary avy amin'ilay mpampiasa Twitter @westminia, Nakarina tao amin'ny vohikala Wiki Tree (CC BY 2.0)
Koa satria ny ranon'orana nandrakotra ny faritra iva tao Seoul izay ahitàna olona an'arivony maro mifanerasera miasa isan'andro, miady mafy ireo fiara mba hanavo-tena amin'ny làlana tondraka.
Mpampiasa Twitter knowledge_bot nibitsika hoe [ko]:
Rehefa tojo fisalasalana ianao manoloana ny hoe handeha eo amin'ilay làlana rakotra rano sa hiova (làlan-kafa), voalohany refeso aloha ny halalin'ny rano ary ohary amin'ny haavon'ny fiaranao. Raha mahatratra hatreo amin'ny iray ampahatelon'ny haavon'ilay fiara ny rano, na antsasany raha fitondrana entana ilay izy, afaka ny handeha eo amin'ilay rano ianao.
Bitsika iray mitohy [ko] namaky:
Tondra-drano tao amin
Raha toa ka mandeha anaty rano tsy lalina ny fiaranao, mandehana mora amin'ny hafainganam-pandeha voalohany na faharoa (vitesse 1ère na 2ème). Rehefa tafavoaka ilay rano tsy lalina ianao, hitsaho matetika ny “frein” mba hanamainana ilay tsindry hisatra mando.
Sary maro sy filazam-baovao maro no nandrakotra ny tontolon'ny Twitter raha mbola nitohy kosa ny oram-baventy androany. Mbola ahiana ny hiavian'ny ora-mikija ato anatin'ny 24 ora, namorona sarintany ao amin'ny Google ireo mponina hanamarihana ireo toerana niharan-doza.
Vaovao farany: ny taha-pahafatesana dia nahatratra 59 ny 29 Jolay. Mikasika ilay hnohono hoe fanapahan-kevitra noraisin'ilay ben'ny tanàna ao Seoul momba ny fanapahana ny vola natokana ho an'ny fisorohana ny tondra-drano ka nahatonga ilay loza, nadikan'ny mpitandro ny filaminana ho siosion-dresaka ilay izy ary nanomboka nanadihady ireo mpampiasa aterineto nanaparitaka voalohany ilay vaovao diso ry zareo, araka ny tatitra [ko] avy amin'ny vaovao any an-toerana.